Miala tsiny amin'i Microsoft, mino fa maimbo Ratsy aho! | Martech Zone
Miala tsiny amin'i Microsoft, mino fa maimbo Ratsy aho!
Zoma, Aogositra 18, 2006 Zoma, Oktobra 26, 2018 Douglas Karr
Rehefa niasa tamin'ny mailaka mivantana tany amin'ny gazety aho, dia tsotra sy nahomby tokoa ny paikadinay. Azonay atao ny mampiasa mahery ny mpanao dokambarotra hampiasa ny programa mailaka mivantana amin'ny alàlan'ny fanomezana fihenam-bidy amin'ny tahan'ny dokam-barotra ankapobeny. Nanana programa mailaka mivantana kalitao izahay, saingy avo dia avo ny vidinay raha oharina amin'ny fifaninanana rehetra. Tena nahomby ilay paikady ary nesorinay tsy an-kijanona ny fifaninanana… na dia nandoa bebe kokoa aza ny mpanao dokam-barotra.
Ao anatiny, paikady tsotra izao ny famerenana izay nampiavaka anay tamin'ny fifaninanana. Ny nampiavaka anay dia ny hoe efa nanana fifandraisana tamin'ireo mpanao dokambarotra ireo izahay, mila mampiasa azy fotsiny. Azoko antoka fa avy any ivelany no mijery, nilaza ny olon-dratsy fa ratsy fanahy isika. Fa raharaham-barotra izany. Tsy nahatsapa ho ratsy amin'izany aho satria heveriko fa ny tombotsoan'ny programa dia mihoatra lavitra ny fandaharan'asan'ireo mpifaninana aminay. Nanao fanadihadiana maimaimpoana izahay, nitazona angon-drakitra mahafinaritra, nitantana ny lisitry ny Do Not Mail, sns.
Ny bilaogy Reaction beta dia misy fampahalalana vitsivitsy momba ny Microsoft Internet Explorer 7 sy ny valin'ny fitsapana ny fanarahan-dalàna miaraka amin'ny fenitra CSS (Cascading Style Sheet). Mahatsiravina ny vokany. Microsoft dia mety hivadika amin'ny lafiny Internet, fa tsy handroso. Mety tsy olana lehibe ho an'ny mpampiasa izany, saingy toe-javatra mahatsiravina ho an'ny orinasa fampandrosoana. Raha mihitatra ny elanelam-potoana amin'ny fomba itondran'ny mpizaha ny fenitra, ny vidiny dia atosika amin'ireo orinasa mizara rindranasa tranonkala. Tsy maintsy manohana sehatra tsy miankina izy ireo miaraka amina kaody sarotra kokoa, ary mety misy karazana fiasa miorina amin'ny rafitra tsirairay. Ugh. Tsingerin'ny fampandrosoana lava kokoa, bibikely bebe kokoa, fitarainana bebe kokoa, sns, sns.
Ka… raha Microsoft ianao ka sendra ratsy toetra dia inona ny paikadinao raha te hamoaka vokatra ambany-fenitra ianao? Angamba ianao hizara izany hatrany. Ahoana raha tsy tian'ny olona izany? Eny… izao rehefa manana ny olon-drehetra mampiasa fanavaozana mandeha ho azy ianao, tendreo fotsiny ny fanavaozana ho Internet Explorer 7 a manakiana fanavaozana. Voavaha ny olana… ny fandraisana an-tsokosoko ny vokatra ambany-fenitra amin'ny alàlan'ny herisetra.
Ny zavatra ratsy dia mpankafy an'i Microsoft aho, tsy a Microsoft dia Ratsy bandy Saingy heveriko fa manimbolo voalavo aho. Ny fiheverako an'i Microsoft dia mety hiova tsy ho ela.
Sintomy ny Firefox, ry havana. Hisy ady io.
Tags: Internet Explorerfananganana betsakaMicrosoft
Fametrahana ny bilaoginao amin'ny "A-List"